Banking Jobs in Dubai - Na-achọ maka ohere ọrụ na UAE 🥇
Gaa na Bank Banks na Dubai
Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
Ọrụ dị na Dubai 2018 maka Freshers
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at November 30, 2017
Banking Jobs na Dubai
Kinglọ akụ na Ọrụ Dubai, n'ihi nke a, ụlọ ọrụ anyị na - enyere aka ịchọpụta ọtụtụ nnwere onwe. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, anyị ga - achọ iduzi gị maka otu ị ga - esi chọta ọrụ na Bank n'ime ahịa Dubai. Ọzọkwa, anyị na - enyere ugbu a aka maka ọrụ na Bloomberg. Ụlọ ọrụ Dubai City N'ihi nke a, na - enyere ndị na - achọ ọrụ si India, Pakistan, Saudi Arabia na Qatar aka ịkwaga maka nzube ọrụ. Dịka isonye na ịmalite ọrụ na ngalaba ụlọ akụ na-ewu ewu na Middle East.
Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu, n'okpuru ọnọdụ ndị a, gaechapụta ihe niile iji nweta ọkwa zuru oke n'ụwa iji chọta onye ọrụ ọhụrụ. N'ọnọdụ ahụ, ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ ọrụ kasị mma maka ọrụ na-achọ ndị mmadụ na UAE.
Ikwupụta aka akparamagwa mba niile na gburugburu Arab nke ndi ulo oru banki hibere na United Arab Emirates. Anyị kere ohere kacha mma Ebe ikwesiri ibido ịmaliteghachi maka ọrụ akụ na Dubai. Ihe akaebe kacha agba akaebe maka ọrụ ịbanye n'ụlọ akụ bụ na ha na-enye ọnọdụ na-eto eto. N'iburu nke a n'uche mkpesa ọgụgụ isi na ngalaba ụlọ akụ na ịkekọrịta azụmahịa ihe omuma. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ kachasị maka azụmahịa ọrụ ọkachamara ọrụ.
Karịa ụlọ ọrụ anyị nile ugbu a na-enyere ndị na-achọ ọrụ ndị agadi aka karịsịa site n'Eshia na-arụ ọrụ dị ịtụnanya na Dubai. Maka ebugharị ndị mmadụ mba ofesi na mba. Dubai City Mmemme ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ na-agbanwe agbanwe kemgbe 2016. N’iburu nke a n’uche, anyị nwere olile anya na ọrụ nchọta ọrụ anyị na enyere anyị aka ma nyere gị aka n’ọrụ nke gị ọrụ Dubai Bank. Maka ụjọ na-enweghị ọbụna inwe ahụmịhe zuru ezu na mpaghara akụ anyị nwere ike inyere gị aka ịgbanwe ọrụ.
Banye ụlọ ahịa na Dubai
Ụlọ ọrụ Dubai City kwenyere na ị ga-amalite ọrụ na onye ọrụ nke nhọrọ. Ọrụ na ụlọ ọrụ ntanye ego na-enyere gị aka ịkwado ọdịiche dị n'etiti ọrụ akwụ ụgwọ na arụ ọrụ. Iji kwu eziokwu, anyị ike ga-enyere aka nweta ọrụ ebe ị bụ na ebe ịchọrọ ịbụ ihe atụ Dubai.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu ezumike si Saudi Arabia gaa Dubai, Kuwait na India na-agafe ụwa. Anyị dị iche ugbu a na ndị mgbe ochie na ndị mmadụ banyere ọrụ ụlọ akụ na United Arab Emirates. Dika odi, ndi otu anyi ekwuputala na mgbe umuaka hapuru akwukwo ulo akwukwo. Ha na enweta oru nzipu ego n’ise n’ise ohere wee bido ọrụ ha maka life. N'iburu nke a n'uche, Citylọ Ọrụ Dubai City emeela nnyocha ụfọdụ.
Na ọnọdụ mbụ maka ụmụ ọhụrụ ndị gụsịrị akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye na-echekwa ego n'ụlọ akụ. Maka ebumnuche a ga-akwalite ndị njem gụsịrị akwụkwọ. N’ikwu okwu, ịga n’ihu onye osote onye njikwa n’alaka ụlọ akụ ahụ ọ ga-ewe afọ ole na ole. N'ọnọdụ ndị ahụ, ịbụ onye e buliri n'ọkwá ọchịchị were oge n’ihe dị ka afọ 3-5 n’obodo Dubai.
Ọrụ Banking na Dubai maka India
N'oge enwere otutu Ọrụ ugbo mmiri maka India ọpụpụ. Karịsịa maka ndị ahụ enwe ezi ahụmahụ maka ọrụ na Dubai na MBA. N'afọ ndị na-esonụ, ndị ọhụrụ na-agagharị na-ajụ onwe ha otu esi enweta ụlọ ọrụ ego na Dubai ?. Mana azịza ya adịghị mfe ịhazi. Imirikiti ndị ọbịa ọhụrụ si n'akụkụ ụwa dum. Iche na nke a bụ ụzọ isi tinye ego. Ma n'eziokwu, ndị ụwa na-achịkwa ịmalite ọrụ na ụlọ ọrụ ego. Na-ekwu na ọ bụ nkọwa zuru ezu ma sie ike ijikwa ohere. Ọbụna maka onye maara ihe.
Afọ ole na ole gara aga mgbe Middle East nọ na-eme mkpọtụ. Na mgbe ọrụ ọhụụ na-aga dị ka oke mmiri na-aga Dubai na Abu Dhabi. Ndị na-achọ ọrụ mba ụwa kwagara Dubai. Karịsịa oru ngo ohuru si South Africa maka ohere ulo oru na Dubai bia biri. Mgbe ahụ ndị na-achọ ọrụ ọhụụ siri n'obodo ha kwaga Emirates. Mana mgbe nlaazu di na 2009. Mgbe ndị ntorobịa ọhụrụ ahapụla obodo ha ma nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ nzụlite. E mepụtara usoro ohuru na ụlọ akụ na Middle East.
Indian kwenye na ya ma ọ bụrụ na ha chọta ọrụ ọ ga-abụrịrị ndụ. Examplekwan bi so no, wɔn a wobisabisaa wɔn nsɛm no UAE. Na ya, Ndị India mara ọkwa maara otú e si enweta ọrụ. Ọrụ mbụ ị kwesịrị itinye n'ọrụ bụ mgbe niile onye na-akwụ ụgwọ ụlọ akụ ma ọ bụ onye isi ahịa. N'iburu nke a n'uche, a ga-akwụ gị ụgwọ ngwa ngwa. N'okwu dị mma, ị ga-enwe ọganihu na onye inyeaka aka n'ime ụlọ na akụ. Ma ọ bụ ọbụlagodi ị nwere ike ijikwa ọrụ gị maka ọnọdụ onye isi njikwa. N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike gbalịa ohere maka ahia na Bank.
Ịga n'ihu na ụlọ akụ
N'otu oge ahụ, na ụlọ ọrụ akụ na ụma Dubai dị ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'èzí UAE na ndabere. Buru na dika o nwere ike, nlekọta ego ihe nkiri, ọ bụghị karịa ọrụ siri ike ịme. A sị ka e kwuwe, ị ga-arụ ọrụ ruo ọtụtụ awa na njikwa ọha na eze na ọtụtụ ndị na-ahụtụbeghị ọrụ siri ike ị na-etinye. N'iburu nke a n'uche, ọrụ gị ga-elekwasị anya na ọganihu na Dubai. Na ngalaba ọrụ na ndị ahịa na-eche ihu ọrụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-amalite n'ozuzu dị ka onye na-akwụ ụgwọ na mmalite nke bụ maka n'aka. Ma ọ bụ na ị ga-enwe ọgaranya ma ịmalite ọrụ na ọrụ ndị ahịa. Ọ dị mkpa ịghọta na ịghọ onye njikwa akaụntụ ma ọ bụ onye na-ahụ maka ahịa ahịa ụlọ ahịa ma ọ bụ ọbụna onye njikwa otu ga-eburu 10 afọ nke ịrụsi ọrụ ike. Na akụkụ ọjọọ, ọ dị mkpa ka ị mara esi ahia onwe gi maka nyocha oru na nkwado nzube. Ma mgbe ị ga - enwe ike ruru eru maka ọrụ ọhụrụ ị ga - achọ ịma ka esi ere ahịa gị ka ikere gị CEO.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ụzọ esi akwụ ụgwọ na Dubai. Enwere ọtụtụ ụzọ iji nwee ọganihu na ngalaba akụ. Mana ọ bụghị ụlọ ọrụ ọ bụla ị ga - enwe ọganihu. Dịka ọmụmaatụ, Deutsche Bank's ebe atụmatụ mgbasawanye ọrụ maka mba ndị na Middle East na Gulf. Mana na ndị ụlọ akụ na Middle East amalitela ịkpụ karịa ọrụ 250 n'ụwa niile. Yabụ Ikpachara anya banyere etu ị họọrọ ụzọ ndụ gị si wee gaa nke ọma.
Chọta ọrụ ndị ọrụ ụlọ akụ na Dubai City
Dị ka ihe atụ nke ọrụ ego ego karịsịa ọrụ na Dubai maka India. Putzọ ọzọ, iji nweta ezigbo ọnọdụ ịchọrọ ịgakwuru ọtụtụ ego ọhụụ ọrụ recruers na Dubai. Ihe mbu ị ga-echetara gị bụ nnukwu ọrụ dị iche iche na ngalaba ọrụ isi ego mba ụwa na Middle East. N'ụzọ dị ịtụnanya dịka enwere ike ịhụ gị na akụkọ akụkọ ahịa banyere Dubai na ahịa ọrụ ego na-eto ngwa ngwa. Karịsịa, maka ndị ọgbọ ọhụrụ na ndị aga ime obodo na-achọ ọrụ maka banki na Dubai.
Njikọ ahụ ghọrọ mkpịsị ugodi nke ihe ịga nke ọma n'ịchọ ọrụ gị. N'akụkụ dị mma, ọnọdụ dị na Emirates bụ onye ndụmọdụ ịgbazinye ego. Ọzọkwa onye na-ahụ maka kaadị kredit, ọhụụ na-enye ndụmọdụ banyere ahịa na-adịkwu oge na Dubai. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ọtụtụ ngalaba na United Arab Emirates, yana ngwaahịa ngwaahịa metụtara ọrụ mkpuchi, esonyela n'ụlọ ọrụ nchekwa akụ ugbu a. karịsịa maka ọrụ na 2018.
Isi okwu ọzọ gbara ndị na-achọ ọrụ ume maka ịnyefe ọrụ ugbu a na Dubai City. Na -ekwu okwu, bụ ndekọ nke ọrụ metụtara ego na Dubai. Na ị gaghị enwe ike inweta ụwa ọzọ na ịkwụghị ụtụ isi. N'ikpeazụkwa ụgwọ ọrụ $ 100k na ego a na-akwụ ya ọ bụ akụkọ mara mma na-enweghị njedebe karịa UAE. Mee maka ọrụ na Dubai maka ọnọdụ na ụlọ akụ ahịa ndị ahịa, akụmaahịa azụmaahịa, yana ego banki. Yana oru ndi mmadu, ahia na nmekorita nke ndi ozo ọrụ na Dubai. Ozokwa arụ ọrụ ego na Dubai, nchịkwa na n'otu aka ahụ, ọrụ IT ugbu a niile na-ekere òkè na ngwugwu nke akụrụngwa maka ịgba ọsọ nke ụlọ akụ na-arụ ọrụ na UAE. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ma ọlị ndị ọrụ na United Arab Emirates nwee ezigbo ọrụ ihu ndị ahịa.
Na-arụ ọrụ na ụlọ akụ na Dubai
Ọ dị mkpa ịghọta nke ahụ ndị ọrụ itinye ego na Dubai na-agbasi mbọ ike. Na-ekwukarị, ịkwesịrị ịchọ oge ọrụ n'ogologo elekere 48 kwa izu. N'ihi na ọtụtụ oge, ọ bụ gburugburu ebe obibi na-akpata arụ ọrụ ma ịchọrọ ịnọgide na-aga. Isi ozo nke na-arụ ọrụ na Middle East ụlọ akụ. Maka ọtụtụ akụkụ na ọnọdụ Middle East na-arụ ọrụ ego nke kachasị arụ ọrụ na ụwa nke ego. Tọọdee na Fraịdee dịka e kwuworo na ọ bụrụ ụbọchị omenala na Middle East. Mana site n'oge ruo n'oge na-adabere na alaka ndị a na-ebelata trading awa n'ụwa nile. Ruo n'oge ugbu a, ndị na-elekọta ụlọ ahịa gbanwere ya nanị ụbọchị atọ n'izu, ọtụtụ ụlọ akụ ndị ọzọ agbasoro ihe nlereanya.
Ebe a na-arụ ọrụ na ngalaba ụlọ akụ na-asọmpi nke ọma. Onwere otutu ndi si mba ofesi bia na aru oru na ebe ndi bank. Iji maa atụ Ọrụ Pakistani na United Arab Emirate. Soro ndị India na ndị South Africa kwabatara ọzọ na-asọrịta mpi mgbe niile. N'ihi na n'eziokwu mgbe ị ga - achọta ezigbo onye ọrụ na UAE. Ọ dị ka imeri lọtrị. You ga-enweta ego karia ị nwere ike iche n’echiche.
Otu esi esi nweta ulo oru ntanye ego na Dubai
Maka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ụlọ akụ na Dubai. A ga-emeso Friday na Satọdee dịka ụbọchị. Ma na nchịkọta, ihe ka ọtụtụ n'ụsọ mmiri nọgidere na-akwụ ụgwọ na Middle East ka nwere 50% nke ụbọchị Tọzdee na ụbọchị Fraịde dum. Ruo ugbu a, a ka nwere awa asatọ kwa ụbọchị. Oge awa dị gburugburu elekere na-eme ihe n'eziokwu maka njikwa na ọkwa nchịkwa ndị isi mana na mberede ihe niile ga-adabere na ọnọdụ ị na-arụ ọrụ ugbu a na Bank. Mana ka anyị chee ya ihu, n'akụkụ ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ nke ọma na ohere ọrụ ego ga-achọ oge ọrụ 24 / 7. N'okpuru ọnọdụ ndị a, onye njikwa ụlọ akụ nwere ike ịhazi oge ahụ gị dịka onye ọrụ na-arụ ọrụ ịkwesịrị ijikwa. N'iburu nke a n'uche, ị nwere ike mgbe niile jiri ekwentị gị chọta ọrụ. N'ụzọ a, ọ ga-adị mfe karị na UAE.
Dị oke mkpa iji mata maka ọrụ ịntanetị na Dubai na ọ bụrụ na ị, dịka ọmụmaatụ, hapụ ọrụ gị n'amaghị ọkwa. Ma ọbụnadị a ga-achụpụ gị n'ọrụ gị n'ụlọ akụ ma ọ bụ azụmahịa. Enwere akara akara na faịlụ gị ọbụlagodi ị na-agbalị ịchọta ọrụ na ụlọ nkwari akụ. Ma ị gaghị agbalịrị ịchọta ọrụ n'otu ọrụ yiri nke ahụ ọ gaghị ekwe omume ịmaliteghachi ego na United Arab Emirates. Na njedebe ikpeazụ, ị kwesịrị ịmara na ọrụ ọrụ gị ọrụ ego na Dubai kwuo na ị gaghị arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ego nwere njikọ maka ọ dịkarịa ala 12 ruo ọnwa 24.
Usoro nchekwa ego na Gulf
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ị kwesịrị ịmara banyere mba Gulf. Ọ bụ ụlọ ọrụ akụ na ụzụ na otu ihe ndị a niile si arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị dị njikere ịrụ ọrụ na UAE. I kwesiri ijide n'aka na ị ma iwu n'ime UAE. Otu n'ime ihe ndị a na - eche echiche bụ na ịkwesịrị inwe ọnọdụ ziri ezi na Dubai mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ mgbe ịmalitere nzere n'ụlọ akụ. Ikwesiri ijisi ike n’aka na ị ga-akwụcha ụgwọ ndị i ji kpamkpam.
Lọ akụ na-akwụ ụgwọ dị iche na Ọwara. N'ihi na ọmụmaatụ na United Arab Emirates. Ikwesiri inwe ego ulo oba ego oge niile n’onwa kwesiri. Gaghị enwe ike ịnwe ego na-enweghị nhazi. Naanị maka na ịnwere ike ịga mkpọrọ ma ọ bụrụ na akwụghị ụgwọ zuru ezu.
Banlọ akụ usoro dị mma na Qatar na Kuwait, karịsịa maka ndị ọrụ ogologo oge. Site na mba ndị a, ịnwere ike ịnwe ezigbo nsonaazụ otuto maka nnyefe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta a Job na Dubai. Ị kwesịrị grab ohere gi ugbua taa. na Bulite Na-amalite Nye ụlọ ọrụ akụ na ụba na-arịwanye elu na Ụwa!
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Banking UAE
Anyị na-enye ndepụta zuru ezu nke ụlọ ọrụ ego na-arụ ọrụ na Dubai. Anyị niile maara na Dubai City na-enye ụlọ akụ ohere maka njem ọhụụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụzọ dị mma ga-esi kwe omume. Ọzọkwa etinyekwa ego na ọrụ nchekwa ego na ndị ndụmọdụ gbasara ụlọ akụ ị ga-enweta n'ime ụlọ akụ UAE. Onwere enwere oge nile inwe ike inweta afọ ojuju zuru ezu nyocha ọrụ maka ọrụ n’ụlọ akụ. Mana ị nwere ike ịchọta ọrụ gị n'ime ụlọ ọrụ ụlọ akụ ma ọ bụrụ na ị na-achọsi ike nke ọma na Middle East. N'iburu nke a n'uche, ụlọ ọrụ anyị na-elekọta n'ihi na ebe kachasi nma diri gi ị kwesịrị itinye akwụkwọ maka ọrụ.
Site na ụlọ ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ ụwa. Ugbu a ị nwere ike ịmalite njem gị na ahịa ego. Ụlọ ọrụ anyị emeela ọbụna otu ụzọ ọzọ maka ọrụ ọhụrụ gị. Anyị kere ọtụtụ ọrụ dị iche iche ebe ị nwere ike ịhụ ọrụ. Gbalịa ịchọta ọrụ ego kachasị mma maka ahụmịhe gị. Ma lelee ihe ụlọ ọrụ bara uru iji nweta ma sonye na ya nzube nke ọrụ ọhụụ ọhụrụ na Middle East. Legodị ihe ọ baara gị uru. Ma tinye akwụkwọ maka ọrụ ọhụụ na United Arab Emirates.
Ọrụ na Emirates NBD
Ụlọ ọrụ a na-enye ọrụ dị n'ịntanetị maka ndị ahịa ya. Emirates NBD na-enyekwa ohere ọrụ HR na Isi Office. N’aka nke ozo, otutu ohere inweta oru maka ndị ọgbọ a ga-enye ahụmịhe dị ala. Site n'aka otu aka ahụ ndị isi ọhụrụ na-agagharị na Dubai. Naanị ọrụ na ụlọ ọrụ a na UAE.
Emirates NBD First, hụrụ ndị ahịa ha n'anya. Lọ ọrụ a na-ezigakwa akwụkwọ ozi ekele maka ị ghọrọ onye ahịa nke Emirates NBD. Agadi isi hụrụ n'anya ọmụma zuru oke na bits nke ndụmọdụ. Ọzọkwa, inyere ndị ọzọ aka na echiche iji mee ka azụmahịa dị mma. Firmlọ ọrụ a na-ajụkarị ịkwanyere ibe ha ùgwù. Onye oru ohuru na-agbaso iwu na usoro niile na usoro niile dị na Middle East. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ a ji kacha mma maka ọrụ ụlọ akụ na Dubai.
Ọrụ na Emirates Banking enye gị ohere dị iche iche nke ọrụ na Dubai. Ndị njem ezigara na NBD wee bụrụ ụlọ ọrụ kacha akwadoro maka UAE ọhụrụ na-achọ ndị ọbịa ọrụ. Emirates NBD ahaziri oge ọrụ ka ndụ ebugharị.
Ụfọdụ ọrụ na ụlọ ọrụ a gụnyere ụlọ akụ ihu na ihu enyemaka ndị ahịa. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịlele maka ọnọdụ dị ka Digital Store Manager. Ị nwere ike inwe ezigbo ọrụ ị ga-eji nweta ụlọ ọrụ gị niile. O kwesịkwara itinye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ UAE.
Ọrụ na UAE na HSBC
Ụlọ akụ ọzọ anyị na-atụ aro ọrụ maka HSBC. A ma ama ụlọ ọrụ a ma na-ewu ụlọ n'ụwa niile. HSBC ghọọ nnukwu ụlọ akụ ụwa nke na-akwụ ụgwọ na Middle East. Ma ugbu a na-agagharị n'Ebe Ugwu Africa na-enwe ọganihu dị ukwuu. Na-arụ ọrụ na Dubai City, nke nwere ọtụtụ alaka na HSBC bụ echiche dị mma ma dị mma. Maka na ị nwere ike ịchọọ ịghọ onye njikwa mpaghara n'oge obere oge na ụlọ akụ a.
Ụlọ akụ a na-enye ohere dị mma maka ọkwa dị elu karịa Ndị isi ụlọ ọrụ C-ndị isi na ọrụ zuru oke nke ndị ọrụ ego. Ịchọ ọrụ na ụlọ ọrụ a bụ site na netwọk gburugburu 300 ọfịs na mba 14. N'ezie bu otu n'ime ebe kachasị mma iji rụọ ọrụ na Middle East.
Ụlọ ọrụ ahụ ejiri karịa ndị 3,000 na United Arab Emirates. N'otu oge ahụ, HSBC nwere onye isi mpaghara na Dubai. Yabụ, n'eziokwu, ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ahụmihe site na sọzu ogo dị elu. Maa, tinye taa ma nwaa iwe N'ajụjụ ọnụ otu n'ime ndị isi ọrụ nnọchite anya nchịkwa dị elu.
Bank Ejiri Azụmahịa na UAE
Otu ụzọ na-arụ ọrụ na United Arab Emirates bụ Bank Ama Ama. Otu n'ime ihe kachasị mma na ọrụ ahịa na edepụtara dị ka ọdụdụ kacha elu n'ụwa enwekwara nnukwu ọkwa na magazin Forbes. N'etiti nnukwu ụlọ akụ na mba. Ụlọ akụ a na-akwụ ụgwọ na-agba mbọ iji nyere ndị mmadụ aka ma na-agba ndị ọhụrụ aka n'afọ ọ bụla. Inye ụlọ ọrụ akụ na ụzụ a dị elu enyerela ha aka ịba ụba ego. Karịsịa iji nyere ndi oru ohuru ohuru na onu ahia aka n'ofu Asia, Africa, na Middle East.
Na-achọ ọrụ ọhụrụ ụlọ ọrụ a bụ ihe obi ụtọ. Ọzọkwa, ọrụ ego na Dubai dị mfe inweta SCB na UAE. Ụlọ ọrụ nwere karịa Ndị 86,000 na-arụ ọrụ na 62 ahịa. Inye ihe ọkwá dị elu gburugburu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịbanye na Gulf. Banklọ akụ a nwere ihe karịrị afọ 150 nke akụkọ ihe mere eme na azụmaahịa azụmaahịa. Chartlọ akụ kwekọrọ ekwekọ na-eto ahịa ha na mpaghara ụwa kachasị ike. Iji maa atụ Qatar, Kuwait na Saudi Arabia. Companylọ ọrụ ahụ na-enyere aka ụlọ ọrụ ụgbọala na-arụ ọrụ ka ebili imeputa ulo oru a n’ime Oke.
Ụlọ akụ a abụghị onye na-agba agba oge. E depụtara ụlọ ọrụ ahụ na Market Stock Market, na nnukwu ụlọ elu. N'ihi nke a, Hong Kong Stock Exchange na-enye ha ego ego ole na ole. Na mma n'akụkụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye mba Asia onye dị njikere ịrụ ọrụ n'ụwa niile. Ị ga-atụle ụlọ ọrụ a na arụ ọrụ gị na nyocha gị. N'ihi na ha abụghị naanị na-arụ ọrụ na UAE. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na Bombay ma na-azụ ahịa n'ahịa ahia mba dị na India.
Ọrụ aka ọrụ na ngalaba ụlọ akụ gọọmentị. Ka anyị bido na websaịtị of Central Bank nke United Arab Emirates. Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike ịkwalite ịkwado ụdị ndụ nke Dubai n'ebe ọrụ na ná ndụ kwa ụbọchị Gov ọrụ bụ maka gị. Gọọmentị na Dubai na Abu Dhabi na-ewu ụlọ mmiri na-akụzi na 2018 ọdịbendị ahụ gụnyere dị ezigbo mkpa maka ọdịbendị Arabic.
Site na Central Bank of United Arab Emirates, ị nwere ike chọta ọnọdụ dị ka onye nchịkwa data yana onye nyocha nyocha nke wayo. N'ime ọtụtụ ọrụ n'ime nnukwu akụ. Nwere ike ịchọta ndị isi gụrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ha na emeputa mkpesa nke Central Bank. Mgbe ahụ, na-enye nke ahụ ozugbo na ndị isi ọchịchị UAE. Companylọ ọrụ a na ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates Emirates na-arụkwa ọrụ.
Central Bank nwere ọrụ dị mkpa maka ịhazi ego na mmejuputa ego. Ọzọkwa, a na-ahazi usoro ụlọ akụ na oke ndị mmadụ naanị nwee ezigbo ahụmihe nwere ike ịrụ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Mgbe ị malite na oru a. Ọrụ gị ga-eme ka ị nweta ụba nke akụ na ụba mba nke UAE. Na mgbe niile jide n'aka na ọrụ gị na-enyefe aka n'ụzọ zuru oke maka ọrụ ego na Dubai.
UAE Ugwu Mashreq
Otu n'ime ụlọ akụ kacha mma maka ndị ahịa na Abu Dhabi. Oge ọrụ na Mashreq dị n'ịntanetị. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ gbagoro ogo ọhụrụ n'ọkwa ọkwa agadi. Ha bụ ugbu a na-eme emepe emepe emepe emepe-C. Ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ akụ na-arụ ọrụ na Mashreq nwere ọtụtụ ohere maka ndị bịara ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-akpọkwa ndị ọkachamara mba ofesi. Ọmụmaatụ site na Philipines na South Africa.
Ụlọ ọrụ a na-enwe ohere ịnweta ohere ọhụrụ. Ha niile emeghe maka ndị ọrụ ọhụrụ ke ererimbot ererimbot. Ihe siri ike na-elekwasị anya na-adọta ndị ọpụpụ ọhụrụ si n'akụkụ ụwa nile ma nke gụnyere Pakistan na India, ndị na-achọ ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụrụ na ị na-elele ịzụlite ahụmịhe nke ego gị site na ọtụtụ ụzụ. Ọrụ ụlọ akụ Mashreq bụ, na nke a, ebe zuru oke iji rụọ ọrụ gị. Egbula oge gị ma chọọ ka ị rụọ ọrụ na bank na Dubai.
Ọrụ na ADIB Bank
Ọmarịcha ebe maka ndị aga-aga ọhụrụ na Middle East. N'ezie, ọ bụ ADIB ebe ị nwere ike ịmalite ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ. ADIB akụ abụghị ụlọ ọrụ ego dị iche iche. Nlekọta nke companylọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ka ọ bụrụ ezigbo ọrụ gbasara ụlọ ọrụ. Karịsịa na United Arab Emirates na Saudi Arabia. Companylọ ọrụ ahụ na-emepụta ohere n'ime ngalaba na ngalaba IT. N’aka ozo, oburu na imara otu esi eme nke gi google ọrụ dị ka onye nchịkwa IT, ị nwere ike ịrọ nrọ ohere ADIB.
Ịrụ ọrụ ya na ụlọ akụ gị nwere ike ịmalite dị ka onye gụsịrị akwụkwọ na onye mmụta. Ụlọ akụ a nwere nza mmemme maka ndị ọhụrụ na UAE. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ ọkaibe ma nwee ahụmịhe ị na-achọ ọtụtụ ohere ọ businessụ vacụ azụmahịa. I nwekwara ike itinye akwụkwọ maka ọtụtụ ndị agadi njikwa ọrụ. Alaka ụlọ akụ a nwere nnukwu ọnụnọ n'ọtụtụ mba na Ọwara. ADIB akụ aka ụlọ ọhụrụ ndị dị na Dubai. Ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a na-akwado ọrụ ọhụrụ na ijikwa akụnụba ndị ahịa.
Ma ị bụ onye Onye ọkachamara nke mba ụwa na-achọ ọrụ. Ma ọ bụ na ị na-achọ ileghara ihe ịma aka ọhụrụ na-adọrọ mmasị na UAE. Ọbụna i nwere ike ị gụ akwụkwọ na Dubai mana ị na-achọsi ike malite ọrụ gi na ADIB bank. Corlọ ọrụ ego a nwere ọtụtụ ọrụ enyere gị aka. Thelọ ọrụ ahụ nwere ohere ịkwalite na ohere ọhụụ na Dubai. N'akụkụ na-adịghị mma, ọtụtụ n'ime nhọrọ na-abịa ọsọ ọsọ na nzukọ a na-eto eto. Mana n'ahịa ego zuru ụwa ọnụ. Yabụ, anyị anaghị akwado ndị ọrụ obodo ka ha wee malite njem ahụ maka ọrụ bank na Dubai.
Ọrụ na Dubai Islamic Bank
Otu n'ime ụlọ akụ kachasị mma maka ndị Muslim na-aga ime na Middle East. Y’oburu na-achọ inweta ọrụ na-aga nke ọma na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. You ga-amararịrị na Islamic Bank na-arụ ọrụ ugbu a na UAE. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnweta ọrụ ogologo oge na UAE. Kwesịrị isonye na Dubai Islamic Bank, otu njikwa. Tù a ghọrọ ọsụ ụzọ n'ụlọ ọrụ ego Islamic. N'inye ha isi ihe ndia, ha nwere arụ ọrụ dị ịtụnanya maka ndị mmeri ọhụrụ. I doro anya, dobeghachi iweghachi gị na akwụkwọ ozi na Dubai Islamic Bank.
Otu n'ime akụkụ dị mma bụ na e guzobere Dubai Islamic Bank na 1975. Yabụ na ndị bu ya ụzọ, ị nwere ike ịtụ anya usoro ọrụ ọrụ ogologo oge. Ndi ohuru ohuru nwere ezi echiche na ebumnuche zuru oke kwesiri inyocha Dubai Islamic Bank. N'akụkụ na-adịghị mma, ọ bụghị mmadụ niile. Karịsịa ọ dịghị onye Alakụba nwere ike ịnye ọrụ banki na ọrụ ego dịka ụkpụrụ nke Sharia Islam. Lọ akụ a bara ụba karịa open maka Pakistan, Saudi Arabia, Qatar na ndị ọzọ na-ekwu okwu ezumike nke Middle East.
Ga-echeta na Dubai Islam Bank. O doro anya na ị nwetawo azụmahịa dịka onye ọrụ kacha elu n'etiti ndị na-achọ ọrụ na Middle East ọ kachasị maka ọrụ ụlọ akụ na Dubai. N'ihi na ụkpụrụ na ebumnuche bụ isi bụ ịkwado ndị ọrụ niile na azụmaahịa. Ọzọkwa, ndị isi njikwa na-anwa imere akụ a otu kachasị mma na GCC.
Dubai Islamic Sharing Banking Jobs in Dubai
Ndi ohuru ohuru nwere nkuzi MBA na - eto n’ime ngalaba ulo oru. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha ma na-achọ inweta ọkwa kachasị mma nke ndị ahịa na Emirates. Welie aka gị tinye maka ohere ọhụụ ma weta ọganiihu ọhụụ na Sharia Islamic. Dubai Islamic Bank n'ezie na-enye ọrụ banki na Dubai n'ogo kachasị elu.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụghị ezigbo agụmakwụkwọ. Ị ka nwere ohere maka ọrụ nrọ na ụlọ ọrụ a. N'ihi na Dubai Islamic Bank na-enye ọtụtụ mmemme dị iche iche maka ndị ọkaibe. Inwe ezinaulo na - eme ka onye obula n’enye gi ogha n’ihu. Nanị iji nyere aka kwado ndị ụlọ gị maka inweta ọrụ ụlọ akụ na Dubai. Na ụlọ ọrụ a na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ogologo oge. Onye ọ bụla ọhụụ ma ọ bụ onye ọhụụ nwere ohere nke aka ha maka inwekwu ọrụ ọrụ aka ọrụ.
Bank Bank nke Dubai
Ụlọ akụ ezinụlọ na Dubai, ịghọ akụkụ nke ezinụlọ CBD ka ịchọrọ inwe ezigbo mbido. Ụlọ ọrụ ahụ abụghị nnukwu ego maka ndị na-achọ ọrụ na mba ụwa. Ọ bụrụ na ị kwagalarị maka ụlọ ọrụ ego na Dubai. Ị ga-elele anya na oge ọhụrụ na Commercial Bank of Dubai. Otu n'ime ihe kacha mma ebe maka inweta ọrụ dị ka onye njikwa otu ma ọ bụ njikwa ahịa. N'ihi na ha abụghị ụlọ ọrụ akụ na ụba ndị ọzọ. O doro anya, ị nwere ike na-erughị ọrụ ma mụta ọtụtụ ihe.
CBD bidoro ịrụ ọrụ na 1969 ma jikwaa nke ọma ruo ugbu a site na ịnye ọrụ banki na Dubai. Nke ego nke Amiri nyere site na onye isi ngwụcha Rashid Bin Saeed Al Maktoum nyere ya ego. N'ime ụlọ ọrụ afọ a amụbawo nke ukwuu, mana ruo ugbu a Ntọala 35th na - egbochi ngalaba akụ na United Arab Emirates. Dịka akụkụ nke atụmatụ mgbasawanye ya na mpaghara Ọwara na Middle East. The CBD amalitela ịkwaga n’akụkụ azụmahịa ọhụrụ. Otu n'ime ha bụ ụlọ akụ na-ere ahịa na SME nwere ego na ụlọ akụ na islam. Na-ekwukarị, ọ bara uru itinye ya n'ọrụ ọ bụrụ n’ị bụ obodo ị bi na obodo Dubai maka ọrụ gọọmentị.
Ọrụ na RAKBANK na Dubai
Ụlọ ọrụ kachasị elu maka ọrụ na Dubai. N'ọzụ, ị nwere ike ịchọta ohere dị ịtụnanya na RakBank. Ụlọ ọrụ na-agbagha ahịa ahịa dị na 2018 na mgbasa ozi. Otu n'ime ahịa azụmahịa kachasị mma a na-akpọsa na ụlọ ọrụ ego. RAKBANK na-ahazi ọrụ ụbọchị. Karịsịa n'ime alaka ndị dị na mpaghara Dubai. Njikwa ụlọ ọrụ a na-enweta ụkpụrụ kachasị elu nke mba na mba nke ụlọ akụ.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ a nwere usoro ajụjụ ọnụ siri ike. Yabụ inweta ọrụ n’aka ha abụbeghị ọrụ dị mfe. Kwesiri ịgafe ihe ịma aka ọgụgụ isi na kọọrọ gị ahụmịhe gị mgbe njikwa na-agba gị ajụjụ. Ụlọ akụ a dị mma maka onye ọ bụla si na mpaghara na ndị na-achọ ụwa na 2018. A makwa ụlọ akụ ahụ dị ka National Bank of Ras Al-Khaimah. Ya mere, ọrụ ego na ụlọ ahịa Dubai na RakBank nwere ike ijikwa ya.
Ọrụ gị na RakBank ga-esiri gị ike kwa ụbọchị. Site na njikwa arụmọrụ n'ime ndị isi ọrụ nchịkwa ego. Ruo obere ọrụ na azụmaahịa azụmahịa. Ruo ugbu a, ụlọ akụ dị na UAE na-etolite n'ụzọ dị ukwuu. Daybọchị ọ bụla na-eje ozi karịa 720,000 ndị ahịa ọhụrụ na ndị dị adị. Startmalite ọrụ Rak-Bank na 1976. Ọ bụ otú ahụ karịa karịa ka ịnwere ike ịtụ anya na usoro nkwalite. Maka akụkụ kachasị, RakBank bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ego obodo kachasị na Dubai bụ ndị ka na-arụ ọrụ. Na 2018 na 2019 gosiri dị ka otu n'ime akụ ya na-eto ngwa ngwa ma dị egwu. Mana ha kwesiri ịrụ ọrụ na nyocha, na Ernst Young na-aga n'oge siri ike na Audit.
Bank Abu Dhabi mbụ
Ọkachamara nke ọrụ na ụlọ akụ na akụ mbụ Abu Dhabi. Na ohere ọrụ maka ụmụ amaala UAE kama expats. Abulọ Akụ Abu Dhabi mbụ na-eto na ahịa obodo. Inye ohere ndi oru ohuru diri onye mba UAE. N’ikwu ya, bank a bụ ihe ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ òtù ego na Dubai na Abu Dhabi. Ụlọ ọrụ na-erezi afọ 41 na Dubai na Abu Dhabi.
N'aka nke ọzọ, iso ụlọ ọrụ a na Abu Dhabi rụpụtara ihe dị ukwuu n'aka ndị isi UAE. Iji maa atụ, iso n’otu otu a na-akwanyere ugwu ugwu na UAE. Studentsmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ nwere nkà na ndị na-anụ ọkụ n'obi na-anwa ịmalite ọrụ na FAB mgbe niile. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ onye na-anabata echiche nke ọma. You nwere ike ịkekọrịta ọhụụ lekwasịrị anya n'ihe mgbaru ọsọ ego n'ime nzukọ a. Mgbe na-arụ ọrụ ọnụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi iji weputa ezigbo ahụmịhe ahịa na UAE.
Buru nke a n'uche mgbe ị na-achọ ọrụ ego na Dubai. Njikwa ụlọ akụ na-enyere ndị ọrụ ha aka ịrụ ọrụ ha. Site n'inyere ha aka iru ulo akwukwo puru iche. Ọzọkwa, nlekọta na-enyere onye ọrụ ọhụụ aka inweta ọzụzụ na agụmakwụkwọ dị mkpa. Ya mere, n'agbanyeghị ihe ọ bụ agụmakwụkwọ gị na ụlọ ọrụ a ị nwere ike ịwelite ụkpụrụ gị.
Emirates amalite Islam na 2004. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ ego. Ịchọta ụlọ ọrụ ego na Dubai ya na nzukọ a kwesịrị ịdị nfe. N'ihi na dị ka anyị niile maara ụlọ ọrụ ọhụrụ hụrụ n'anya na-eto ngwa ngwa. Karịsịa ego Dubai na Abu Dhabi oru. N'akụkụ na-adịghị mma, onye ọrụ ọhụrụ na Emirates Islamic Bank. N’ezie, ị ga-agbasi mbọ ike iji nyefee usoro kacha mma maka ọrụ ụlọ akụ. N'ihi na akụ na-eto eto dị onye na-arụ ọrụ kasị sie ike na UAE.
N’oge na-adịghị anya, ọrụ ọhụrụ ga-ebute na Emirates Islamic Bank. Yabụ ndi oru ohuru ohuru mgbe ajuju ha chọrọ ịma ihe a ga-ekwu. Ụlọ akụ a na-arụ ọrụ nke ọma n'ime usoro iwu kachasị elu nke ụkpụrụ Shari'a. Ọzọkwa, omenala Arabic nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ ego a.
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji bido ụlọ akụ a. Kpachara anya inwe ọnọdụ ọrụ ndị ahịa. Ọrụ dị iche iche nke ọnọdụ a gụnyere ịnye ndị ahịa ha ọhụụ na ndị dịbu dị iche iche ngwaahịa. Mana n'otu ntabi anya inwere ike ịkwalite ma wezuga onwe gi site na ọnọdụ onye ndụmọdụ ego. Na-enyerezi ndị aka azụmaahịa obere aka na nnukwu ụlọ ọrụ. Iji tozuo ahia Emirate. Banklọ akụ Alakụba bụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ ọrụ dị mma na-arụ ọrụ.
Banking Jobs na Dubai ADCB
Usoro nkeonwe maka onye ọrụ ọ bụla na inyere ndị ọzọ aka. ADCB Bank bụ ezigbo ebe ọrụ. Nchịkwa nke ụlọ ọrụ ego ndị a nwere ebumnuche ha. N'otu oge ahụ, ADCB na-ele anya Ngosipụta 2020. Banklọ akụ na-aghọ ndị kasị baa uru na United Arab Emirates. Onye isi nchịkwa ọkwa kwupụtara na ha ga-etolite dị ka isi mmalite nke ndị na-ahụ maka ikike na Abu Dhabi.
ADCB na-arụ ọrụ site na afọ mbụ e guzobere na 1985. Kemgbe ahụ ụlọ akụ ahụ etoola. Ọnụnọ ya dịkwa oké ọnụ ahịa nye Gọọmenti UAE. Ụlọ akụ ahụ malitere ezigbo ego. N'otu oge ahụ na-aga n'ihu n'ike iji ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ndị na-ahụ maka ụgwọ ọrụ ADCB nwere ọchịchọ siri ike maka ịchụ ndị mmempụ mba. Ọhụrụ a na-ahapụ ndị na-ekpo ọkụ ka ha bulite CV na ngalaba Ngalaba. Ụlọ akụ a na-enye ọtụtụ ohere ọbụna maka ndị inyom.
Chọ ọrụ ụlọ akụ na Dubai n'ofe nzukọ ekwesịghị ịbụrụ onye ọ bụla nsogbu. N'ihi na ndị otu ahụ nwere mmasị dị ukwuu n'ịchụso ndị aga-aga ọhụrụ na imezu oghere dị n'ime. Iji bido n’ụlọ akụ a ohere ọrụ ịchọrọ itinye n'ọrụ na saịtị ọrụ.
Na-ebugote ịmaliteghachi gị n’ezie ga enyere gị aka isoro ndị ọrụ ibe ọhụrụ sitere n’ụwa niile. Withrụ ọrụ na ADCB gụnyere ijere ndị ahịa ozi n'ofe Middle East. N'ihi na ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma maka ịme ụlọ akụ na-arụ ọrụ na Dubai.
Nweta ohere site na ADCB Bank
Ọmụmaatụ, enwere ike inye gị ohere dị iche iche n'ebe ahụ. N'ihi ọrụ ego banyere ADCB na Dubai gụnyere ịrụ ọrụ niile n'akụkụ niile nke arụmọrụ. Ka anyị malite na ọrụ ahịa ahịa ahịa. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịkwaga ngalaba azụmahịa na ụlọ akụ na ego.
Kwado ọrụ ọrụ okenye dịka na-adụ ọdụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na Dubai. Ị nwekwara ike ịchọta ohere ego ndị mmadụ nwere. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịga na nkà na ụzụ na ịzụ ahịa ego na ụlọ ọrụ Dubai. Bank ADCB Ijikwa alaka na ọtụtụ ebe na Abu Dhabi, Dubai, Sharjah na Al Ain.
Ọrụ na Dubai Noor Bank
Companylọ ọrụ na-esote ebe ị ga - ezigara CV gị bụ Noor Bank. Nke a na-akpọbu Noor Islamic Bank. E guzobere ngalaba nke mbụ na Jenụwarị 2008 na Dubai. Kemgbe ahụ gara nke ọma na United Arab Emirates. Employmentchọta ọrụ na obere oge enwere ike na Noor Bank.
Onye a na-arụrụ ọrụ arịwanye elu n'oge dị mkpirikpi. Banor Bank nyere a ihe omumu nke oru ngo n'UAE. Dịka ọmụmaatụ, ịre ndị ahịa ahịa ngwaahịa na ọrụ. Ijikwa Pọtụfoliyo ego ọ bụla maka ndị ahịa dị adị. Inyere aka n'eto ohuru azụmahịa na Dubai ma mepụta akụkọ maka usoro ụlọ akụ ọhụrụ. Otu n'ime ọrụ kachasị mma bụ njikwa akụ. Nwekwara ike ịnata ọrụ maka ọrụ aka dika onye ndumodu mkpuchi. Ọzọkwa, akụ, na ọkachamara onye isi ahịa.
Ụlọ ọrụ Nọọmenti Noor nwere nsonye 95 pasent site na Noor Investment Group. N'aka nke ọzọ, 5 pasent bụ nke Emirates Investment Authority. Ma n'akụkụ dị mma, enwerekwa ọgụgụ isi nke ndị ọ bụla nwere ego. Na ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ na UAE. Maka ụlọ ọrụ akụ na ụba na Dubai, ụlọ ọrụ Noor nwere ikike dị elu n'ofe United Arab Emirates.
Ọrụ ego na United Arab Bank
Companylọ ọrụ na-esote ebe ị ga-eziga Resume bụ United Arab Bank. Companylọ ọrụ a na-achọ ịnara ndị ọrụ ikike mba dị elu. N’ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụrụ n’ịma ama akwụkwọ. Can nwere ike ịmalite na-arụ ọrụ na a ahuhu iji ego. N'ezie, na ụlọ ọrụ United Arab Bank na-enye ohere dị iche iche. N'ezie A na - etolite ohere ọhụrụ n'ụlọ. Na United Arab Bank ị nwere ike ịzụlite nkà gị ma too ọrụ.
Ọrụ ụlọ akụ na Dubai Al Hilal Bank
Otu n'ime ụlọ akụ kachasị ọhụrụ na UAE. Ralọ ọrụ a enweghị ọkwa dị oke elu. Mana nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ na-esote gị ebe ị malitere ọrụ. Ndị ọrụ gọọmentị webụsaịtị na-ekwu na Al Hilal Bank na-arụ ọrụ. Onye isi ụlọ ọrụ na ụlọ akụ na-anwa ime ka usoro ụlọ akụ dị mfe mgbe niile. Na ohere ọrụ Emebeghi maka ndi isi ulo oru izu oke. Enweghi otutu ohere uto. Mana ụlọ akụ a na-enye ọrụ. Yabụ mgbe ị ka ga-anọnyere chọta ọrụ. Gbalịa ịbụ eziokwu maka ụkpụrụ okpukpe Islam. Maka akụkụ ka ukwuu, Al Hilal Bank amalite na-arụ ọrụ site na 19th nke June 2008. Ichikota ego ndi Abu Dhabi hibere Council nyocha. Companylọ ọrụ a na-arụ ọrụ site na Abu Dhabi ebe a na-akwado ngalaba nke mbụ.
A ọrụ na DBS Singaporean Bank ke Dubai
Eziokwu gbasara ụlọ akụ ahụ bụ na Singapore na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ dị ike. Nke a bụ ezigbo ozi maka gị. Maka enwe ọganihu siri ike na ọrụ gị. Companieslọ ọrụ mba ofesi tinyere aka. Kinglọ akụ dị na Dubai chọrọ mgbanye ịtụnanya na ohere a na-apụghị ịgụta ọnụ. Imirikiti ọrụ ọsọ ọsọ mba ụwa na-arụ na Middle East ọrụ ahịa. Dlọ akụ DBS abụghị naanị ọ joyụ na-akpali akpali. Ma ihe omuma ego bu obi nke ulo oru a. Ma n’ezie, njikwa ụlọ ọrụ a maara ihe a ga-eme ndị ahịa ọhụrụ.
Isi ụlọ ọrụ DBS bụ ndị otu ọrụ ọrụ ego na Eshia. Kwa ụbọchị ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ ndi mmadu kachasi nma nke di gburugburu Gulf na Asia. Banklọ akụ a Singapore na Dubai nwere karịa 250 alaka gafere ahịa 17 n'ụwa niile. N'akụkụ na-adịghị mma isi bụ edepụtara ka Singapore. Yabụ na ọ bụghị nfe ahụ ka agagoro ego maka ohere onye isi ụlọ ọrụ C. Ọnọdụ kacha njọ ị nwere ike ịbanye Singapore. DBS Bank, n’ikpeazụ, nwere a na-eto eto na United Arab Emirates.
Companylọ ọrụ ahụ natara ọtụtụ enọ. Dịka ọmụmaatụ ụlọ akụ kachasị nchebe maka ndị na-ahụ maka ịntanetị na Eshia. Ọzọkwa nke sitere na ọkwa ego zuru ụwa ọnụ site na Global Finance maka afọ isii, site na 2009 ruo 2014. Na-adị amaara maka ochichi ya na mpaghara Mpaghara Mpaghara. Maka inweta ihe omuma ndi ozo, gaa na peeji ha ebe inwere ike ichu ego na ulo oru Dubai.
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-azụ ego
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka ahụmahụ ego. Ụlọ ọrụ Dubai City nwere mgbe niile inye onyinye ọrụ. Karịsịa maka ndị nwere ahụmahụ zuru ezu iji rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ dịka Bloomberg ma ọ bụ Ernest Young. Enwere ụlọ ọrụ ole na ole ndị ị ga-aga tupu i bi na ibe. Enweghi otutu ohere ndi ozo na echere ndi kachasi ike n'ahịa. Na nke a, nchọpụta ọrụ bụ ebe ị na-alụ agha.
Ọrụ na Bloomberg
Anyi ekwesighi ime ka ị kwenye maka Ọrụ na Bloomberg. Corlọ ọrụ kacha elu dị elu ama ama ama ama n'ụwa niile. Dị ka a pụrụ isi hụ, ụlọ ọrụ Bloomberg bụ ya, onye ndu ihe ọmụma na-enweghị mgbagha. Firmlọ ọrụ a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị karịrị ahịa ahịa ma na-enye ezigbo ego azịza. Karịsịa maka ndị ahịa dị adị. Otu n'ime ọrụ Bloomberg na-enye. Bụ ezigbo oge na data akụkọ ihe mere eme ka ndị ahịa na ndị ọkachamara n'ihe banyere ego gburugburu ụwa.
Nlekọta na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị. Ruo ugbu a ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka nke kachasị n’ahịa. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ na-ejigide ịdị mma na izi ezi nke Bloomberg amaralarị nsonaazụ ya. Nlekọta ndị isi na ngalaba HR na-ewepụta ndị kacha mma n'ụwa n'ụwa niile. Onwe onye ohuru ohuru maka ulo oru a na emeputa ma na-emegharia odini n’uwa ahia n’uwa n’uwa.
Can nwere ike ịrụ ọrụ dị ịtụnanya ebe a. Ohere mmepe ọrụ anyị ga-enye gị ihe niile ịchọrọ iru ike gị niile mana ọ dị gị n’aka ime ya.
Ọrụ na EY na United Arab Emirates
Na-ekwukarị gbasara oghere ego. Anyị kwesiri ịgbakwunye EY na ndepụta nke ụlọ ọrụ kachasị maka ọrụ. N'ihi na nzukọ a bụ onye ndu ụwa niile na mmesi obi ike yana ụtụ isi, azụmahịa. Na ọrụ ndụmọdụ kachasị mma maka ụwa niile maka ndị ọchụnta ego. Ernst & Young nwere ihe karịrị ndị ọrụ 167,000 Obodo. Ha niile jikọtara ọnụ site na ịkekọrịta ego gbasara ego. Na United Arab Emirates, ụlọ ọrụ ọhụrụ na-akpali ndị ndụmọdụ ego ọhụrụ. Na EY ndị na-arụ ọrụ n'ụwa nile ma mee ihe ziri ezi mgbe niile. Nke a bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ a ji mara amara na Emirates. Ha na-ewuli ntọghata kwesịrị ekwesị na ntinye aka na ọrụ ọrụ ego.
Nchikota maka ulo oru ego
Anyị nwere olile-anya na anyị nwere kpuchie gị isi ihe zuru ezu ntuziaka. Na-atụ anya na a ga-ewe gị n'ọrụ maka ọrụ ịnwe ego na Dubai. Mgbe itinye akwụkwọ maka weebụsaịtị ndị a. Ikwesiri inweta ego ulo oru banyere. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, ọbụlagodi nweta ezigbo ozi ọrụ. Karịsịa banyere mkpa ị nweta ụlọ ọrụ ọhụrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ndị otu anyị nwere nnukwu olile anya na ị ga-amasị ọkwa anyị. Will ga-ekerịta ya na Facebook na Twitter iji nyere ndị ọzọ aka. Jisie ike Ndị njem Middle East na ndị na-achọ ọrụ.